ဟိုချီမင်း - မွေ့နဲ့ - Myanmar Getaway Travels Myanmar Getaway Travels
ဟိုချီမင်း - မွေ့နဲ့
Tour Price: 330 USD Tour Code: MGW-V03 Tour Duration: ၃ ညအိပ် / ၄ ရက် Destination: ဟိုချီမင်း - မွေ့နဲ့
Vietnam Tour from 18 August to 21 August ( 3N /4D) Tour
? ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်း-ရန်ကုန် (အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်) Vietnam Airlines
?3*** Star အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်တွင် ၃ ညတာ တည်းခိုခွင့်။
? ဖော်ပြထားသည့် မနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညစာ စားသုံးခွင့်များ။
? ခရီးစဉ်တလျှောက် Air-Con Express ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
? သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ကြေးများ။
? မြန်မာစကားပြော Tour Leader တစ်ဦး။
? ဗီယက်နမ် Tour Guide တစ်ဦး။
? နေ့စဉ် ရေသန့်ဗူး တစ်ဗူးနှင့် Wet Tower တစ်ခု။
? Myanmar Getaway Travels မှ ပေးအပ်သည့် ခရီးသွားလက်ဆောင်များ။
✅ ခရီးစဉ်တွင် မဖော်ပြထားသော လည်ပတ်မှုများ၊ ကင်မရာကြေးများနှင့် ဝင်ကြေးများ။
✅ ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် သီးသန့်မှာယူ စားသောက်မှုများ။
✅ ဟိုတယ်တွင် သုံးစွဲသော အဝတ်လျှော်ခ၊ ဖုန်းသုံးစွဲမှု နှင့် Mini-Bar သုံးစွဲမှုများ။
✅ Tip Moneys များ။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှVietnamAirlines(VN942)ဖြင့်ဟိုချီမင်းမြို့ရှိလေဆိပ်သို့ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ပါသည်။ဟိုချီမင်းလေ ဆိပ်မှတစ် ဆင့် Air-Con Express ဖြင့်ထွက်ခွာပြီးဟိုချီမင်းမြို့ဟိုတယ်သို့Check-in ၀င်ပါမည်။ ညနေတွင်Ben Thanh Marketသို့ဈေး ၀ယ်ထွက်ကာညနေစာကို SiagonRiverCruise ပေါ် တွင်တည့်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ထိုနောက်တစ်နေ့တာပင် ပန်းသမျှကိုဟိုတယ် သို့့ပြန်ကာအပန်းဖြေအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာစားသုံးပြီးနောက်ဧည့်သည်တော်များအား ဟိုချီမင်း၏ သမိုင်းဝင်နေရာ ဖြစ်သည့်Reunification Palace၊ ရှေးဟောင်းလက်ရာအတိုင်း မပျက်မစီး ထိန်းသိမ်း ထားသည့် Central Old Post Office နှင့် ပြင်သစ် ကိုလိုနီခေတ်ကအတိုင်း မူမပျက်ထိန်းသိမ်း ထားသည့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း Notre Dame Cathedral ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ War Museum သို့လည်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ နေ့လည်စာကို Restaurant တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် မွေ့နဲ့ ကမ်းခြေသို့ ထွက်ခွာကြ ပါမည်။ ကမ်းခြေသို့ ရောက်လျှင် Hotel Check-In လုပ်ကာအနားယူကြပါမည်။ ကမ်းခြေတွင်အပန်းဖြေ အနားယူပြီးသောအခါ ညနေစာကို Restaurant တွင် တည့်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ညစာစားသုံးပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ Check-in ဝင်ကာ အိပ်စက်အနားယူကြ ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာစားသုံးပြီးနောက်ဧည့်သည်တော်များအား Mui Ne ကမ်းခြေ၏နာမည်ကျော် အနီရောင်သဲသောင်ခုံး များရှိရာ သဲနီကန္တာရ နှင့် အဖြူရောင်သဲသောင် ခုံးများရှိရာ သဲဖြူကန္တာရ တွင် ပျော်ရွှင်စွာဆော့ ကစားကာ အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးနိုင်ရန်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ဆက်လက်၍ Mui Ne ကမ်းခြေရှိ တံငါးရွာသို့ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ချန်မင်းဆက်ကတည်းက တည်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း Poshanur Tower သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ နေ့လည် စာကို Restaurant တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီးသောအခါ Cable Car နဲ့ တောင်ပေါ်တက်ပြီးမှ သွားရောက်ဖူးမျှော်လို့ရမယ့် Linh Son Pagodar သို့ ဘုရားဖူးသွားပါမည်။ ထို့နောက် တောင်ခြေရှိနဂါးမောက်သီးများ သီးသော စိုက်ခင်းသို့ လည်ပတ်ပါမည်။ ဆက်လက် ၍ ဟိုချီမင်းမြို့သို့ထွက်ခွာပြီး မြို့၏ နာမည်ကျော် Saigon Square တွင်ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ ညနေစာကို Restaurant တွင် တည့်ခင်းဧည့်ခံပါ မည်။ ညစာစား သုံးပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ Check-in ဝင်ကာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ စားသုံးပြီးနောက် Air-Con Express ဖြင့် လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာ ကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုချီမင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှတဆင့် Vietnam Airline (VN943) ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ပါသည်။